TOE-DRAHARAHAM-PIRENENA : Izay vao mazava amin’i Afrika atsimo
Ny alakamisy tamin’ny 9 ora sy 30 minitra alina no tonga teny Ivato ny fiaramanidina manokana nitondra ny Filoha Rajoelina mivady sy ireo delegasiona niaraka taminy. « Izay vao tena mazava amin’ny Afrika Atsimo ny toe-draharahan’i Madagasikara. Ny marina tsy mba maty. 19 mai 2011
Hatramin’izay mantsy dia feon-dakolosy tokana no henony. Izao vao nisy fihaonana mivantana tamin’ny tompon’andraiki-panjakana Afrikanina tatsimo hatramin’izay », hoy ny Filoha.
Tohin’ny fandresen-dahatra tamin’ny filazana ny zava-nisy marina teto Madagasikara, mahakasika ny toe-draharaham-pirenena, no anton-dian’ny Filoha Rajoelina tany Afrika Atsimo sy Louanda (Angola), izay ao anatin’ny vondrona « Sadc ». Ny alatsinainy lasa teo izy dia nihaona tamin’ny Filoha Jacob Zuma tao Prétoria ary ny alarobia izy dia noraisin’ny Filoha José Eduardo Dos Santos tany Louanda.
Araka ny fanampim-baovao voaray, nandritra ny resaka nifanaovan’ny Filoha Rajoelina teny Ivato, dia nisy ny fitsidihana ny orinasa fanaovana simenitra « Cif Louanda cimente Ltd », ankoatra ny fihaonany tamin’ny Filohan’i Angola. Ny mpandraharaha mampiasa vola ao amin’io orinasa io ihany no hanangana ilay toeram-pamokarana simenitra any Mahajanga, izay tafiditra ao amin’ilay fandaharanasan’ny Filoha Rajoelina antsoina hoe : « tetikasan’ny Filoha ».
« Voazava ny hetahetam-pontsika »
Raha araka ny tafa nataon’ny Filoha Rajoelina teny am-pahatongavana, dia nambarany fa « Samy resy lahatra ireo Firenena rehetra nandalovanay fa ny firosoana amin’ny fifidianana no vahaolana. Voazava tamin’izy ireo ny hetahetam-pontsika ary isan’ny tena niadiana ny tsy hiitaran’ny Tetezamita ela intsony. Mankany amin’ny fizorana amin’ny tondrozotra sy ny fifidianana izany ». Ankoatra izay, dia noraisina tamin’ny fomba manetriketrika amin’ny maha Filohan’i Madagasikara azy Rajoelina Andry tany Louanda-Angola. Noporofoin’ny gazety mpiseho isan’andro iray any an-toerana antsoina hoe « Journal d’Angola » izany. Misy ireo Firenena tena resy lahatra tahaka an’i Maorisy, ary nanao fanambarana momba izany ry zareo.
« Tsy miova ny datin’ny fivoriana »
Nanamafy ny Filoha Rajoelina, fa « tsy misy fiovana ny fivorian’ny vondrona Sadc amin’ny 20 mey ho avy izao, izay handinihana ny olan’i Madagasikara sy Zimbabwe. Isan’ny noresahina tamin’ireo Firenena notetezina ny filazana, fa maniry ny hamahana ny olana amin’ny alalan’ny fifidianana i Madagasikara, ary resy lahatra amin’ny fampiharana ny tondrozotra izay novolavolain’ny vondrona Sadc. Zon’ny vahoaka rahateo ny mitaky ny fifidianana eto amin’ny Firenena. Andrasantsika ampitoniana ny fanapahan-kevitry ny Sadc ».
Isan’ny voaresaka teny Ivato, ny mety ho fanadiovana ny eo anivon’ny Fiadidiana ny Filohan’ny Tetezamita (Prezidansa), araka ny voalazan’ny gazety « Jeune Afrique ». Nanamafy ny Filoha Rajoelina, fa « ny olona no mampandroso ny Firenena iray. Noho izany, tsy maintsy hisy ny fanamboarana raha tiana ny handroso ».
Tafody an-tanindrazana, ny alakamisy alina teo, ny Filoha Rajoelina sy ireo delegasiona niaraka taminy rehefa avy any Afrika Atsimo sy Angola nanohy ny fandresen-dahatra ireo Filohampirenena eo anivon’ny vondrona « Sadc ». « Tafapetraka amin’ny toerana misy azy i Madagasikara… Ary andrasantsika ampitoniana ny fanapahan-kevitry ny Sadc », hoy izy teny Ivato.